Akwụkwọ mpịakọta mpempe akwụkwọ | China eriri igwe mpempe akwụkwọ Manufacturers, suppliers
Rolled Ọla kọpa foils
2L Mgbanwe Ọla kọpa Clad Lam ...
Mpempe ọla kọpa
Echebe ED foils ọla kọpa
Ọla kọpa Electrodeposited ...
ED Ọla kọpa foils maka Li-ion ...
Eriri ọla nke dabere na ọla kọpa, zinc na ihe ndị dị ka akụrụngwa ya, site na nhazi site na ingot, mpịakọta na -ekpo ọkụ, mpịakọta oyi, ọgwụgwọ okpomọkụ, nhicha ụlọ, ịchacha, mechaa, na ịkwakọba.
Nhazi ihe eji arụ ọrụ, plastik, akụrụngwa, njikwa corrosion, arụmọrụ na tin dị mma.
A na -eji ya n'ọtụtụ ebe eletriki, ụgbọ ala, nkwukọrịta, akụrụngwa, ịchọ mma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Mpekere ọla bụ ọla kọpa nwere tin, aluminom, na ihe ndị dị ka ihe ọkụkụ, site na nhazi site na ingots, mpịakọta na -ekpo ọkụ, akpọrepu oyi, ọgwụgwọ okpomọkụ, nhicha elu, ịcha, imecha na ịkwakọba, ihe nwere ike mkpụrụ dị elu, ike ọgwụgwụ, ihe na -agbanwe. na usoro ịkpa oke dị mma.
Mpempe akwụkwọ ọla
A na -eji mpempe ọla kọpa mee ọla kọpa, site na nhazi site na ingot, mpịakọta na -ekpo ọkụ, mpịakọta oyi, ọgwụgwọ ikpo ọkụ, nhicha ụlọ, ịcha, gwụchaa, wee kwakọba.
Ọla kọpa maka ụbara ụzọ
A na -eme ihe maka okpokoro ọkụ mgbe niile site na alloy nke ọla kọpa, Iron na phosphorus, ma ọ bụ ọla kọpa, nickel na silicon, nke nwere ọnụ ọnụ nke C192 (KFC), C194 na C7025. na KFC bụ ndị nnọchi anya kachasị maka ọla kọpa, iron na phosphorus alloy, ha bụ ihe a na -ahụkarị.
A na -eji eriri ọla kọpa mee eriri ọla kọpa, site na nhazi site na ingot, mpịakọta na -ekpo ọkụ, mpịakọta oyi, ọgwụgwọ ikpo ọkụ, nhicha ụlọ, ịcha, gwụchaa, wee kwakọba.
Ihe a nwere ezigbo ọkụ na ọkụ eletrik, ductility na -agbanwe agbanwe na nguzogide corrosion dị mma. A na -eji ya n'ọtụtụ ebe eletriki, ụgbọ ala, nkwukọrịta, akụrụngwa, ịchọ mma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọla kọpa-nickel warara
A na-eji ọla kọpa, ọla kọpa, nickel, zinc na trace ọcha mee ọla kọpa-nickel, site na nhazi site na ingots, mpịakọta na-ekpo ọkụ, akpọrepu oyi, ọgwụgwọ okpomọkụ, nhicha ụlọ, ịchacha, ịchacha, mbukota na usoro ndị ọzọ. ngwaahịa a nwere ọmarịcha gloss, ọmarịcha arụ ọrụ na -ekpo ọkụ na oyi, ductility, nguzogide corrosion, nguzogide ike ọgwụgwụ, mgbanwe dị elu, ezigbo ọkụ eletriki na akụrụngwa na arụmọrụ nchekwa.
Ihe ịchọ mma ọla kọpa
A na -eji ọla kọpa eme ihe dị ka ihe ịchọ mma kemgbe ogologo oge. N'ihi ihe a nwere ductility na -agbanwe agbanwe na nguzogide corrosion dị mma. Ọ nwekwara elu ya na -egbu maramara na ihe owuwu siri ike. Ọ dị mfe ka onye na -ahụ maka kemịkal na -acha ya. A na -ejikarị ya eme ọnụ ụzọ, windo, uwe, ihe ịchọ mma, elu ụlọ, mgbidi na ihe ndị ọzọ.
Mpempe akwụkwọ ọla kọpa dabere na ọla kọpa electrolytic, zinc na trace elements dị ka akụrụngwa ya, site na nhazi site na ingot, mpịakọta na -ekpo ọkụ, mpịakọta oyi, ọgwụgwọ okpomọkụ, nhicha ụlọ, ịchacha, mechaa, na mgbe ahụ. Nhazi ihe eji arụ ọrụ, plastik, akụrụngwa, njikwa corrosion, arụmọrụ na tin dị mma.
CIVEN Metal bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na nyocha, mmepe, imepụta na nkesa ihe igwe nwere oke